लालबोझीमा उदाएको लाल आकाश | ...Yadharu
Home > यादहरु	> लालबोझीमा उदाएको लाल आकाश
लालबोझीमा उदाएको लाल आकाश
March 15, 2010 Dilli Malla	Leaveacomment Go to comments
अन्तिमपल्ट मेलटाकुराको मेलामा जतिबेला मैले उनलाई देखेको थिए, त्यसको झण्डै एकवर्षपछि उनको सहादत भएको खबर सुनेँ । त्यतिखेर म भर्खर-भर्खर पाइला चाल्दै थिए क्रान्तियात्रामा, बाबाको पछिपछि हाट झरेको फुच्चे हटारुजस्तो । उसो त म उमेरले पनि उनीभन्दा निकै पछाडिको परें त्यसैले उनीसँग मेरो खासै छलफल, सहकार्य र भेटघाट भएन । मलाई त्यतिबेला उनको विषयमा यतिमात्र थाहा थियो कि उनको नाम ‘आकाश’ हो । उनी छापामार दस्ताका एक लडाकु, सक्षम र बहादुर सिपाही हुन् । जनयुद्ध थालनीपछिका तीनचार वर्षसम्म कहिलेकाँही हाम्रो घरमा आउने, दिनभर घरभित्रै लुकेर बस्ने, जब रात पर्छ तब झोला र बन्दुक बोकेर अँध्यारोमा यात्रा तय गर्ने छापामारहरुमध्ये उनी पनि एक हुन् ।
मलाई अहिले पनि सम्झना छ, उनीलगायत झण्डै आठ दशजना छापामारहरु कहिलेकाँही मध्यरातमा हाम्रो घरमा आउँथे र ढोकामा सुस्तरी ढक्ढक् पार्थे । उनीहरुलाई त्यतिबेला स्क्वाइड भनिन्थ्यो । ठूल्ठूला झोलाहरु, लामा-लामा भरुवा बन्दुक, आफैले बनाएका बम, माइन र तोपहरु बोकेका हुन्थे उनीहरुले । जनयुद्ध थालनीको झण्डै ४ वर्षपछि मात्र मैले उनीहरुको हातमा राइफल देखेको थिए । मैले उनीहरुलाई दिउँसो हिडेको कहिल्यै देखिन । जब २०५६ जेठको अन्त्यतिर जाजरकोटको लहँ इलाका प्रहरी चौकी कब्जा भयो, त्यसको झण्डै एकसातापछि मात्र मैले हाम्रै गाउँमा तत्कालिन प्लाटून र स्क्वाइड दलका छापामारहरुलाई दिउँसै हिडेको देखेको थिए । त्यतिबेला उनीहरुको हात-हातमा भरुवा बन्दुक हैन राइफलहरु थिए ।
शहीद रुपलाल बोहरा 'आकाश' । जसले सल्यानी भूमिमा जन्मिएर पनि क्रान्तियात्राको क्रममा कैलालीको लालबोझीमा रगत बगाएका थिए ।
आकाश शुरुमा तिनै स्वाइडको कमाण्डर थिए । पछि जनसेनाको प्लाटून बनिसकेपछि त्यसको सेक्सन कमाण्डर भए । उनीलाई नजिकबाट चिन्ने उनका सहयोद्धाहरु भन्छन्- आकाश ज्यादै लडाकु योद्धा थिए, युद्धमोर्चामा जहिले पनि अग्रपंक्तिमा जान रुचाउने उनी जति फौजी ज्ञान र क्षमतामा दक्ष थिए, त्यत्तिकै दुश्मनलाई ‘सर्पराइज’ दिन पनि सिपालु थिए । उसो त सानैदेखि खेलकूदमा असाध्यै रुचि राख्ने आकाशले भलिबल, फूटबल, हाइजम्प, लङ्गजम्प, छेलो, कपर्दीलगायत प्रायजसो खेलमा सहकर्मी साथीहरुलाई सधै उछिन्थे रे ।
जतिबेला मैले उनलाई अन्तिमपल्ट देखेको थिएँ मेलटाकुराको मेलामा । त्यो ०५७ भाद्र २० गतेको दिन थियो । वर्षायाम भएपनि पानी परेको थिएन, आकाश खुल्ला थियो । निलो आकाश छोएझै गरी सम्मुखमै कुमाख पहाड ठिङ्ग उभिएको थियो । कुमाख फेदीमा चिटिक्क मिलेको जिमाली गाउँ । तल बडाचौर, पैयाँकाटिया, थापाचौर हुँदै बगेको जिमाली खोलाको सुस्साहट र मेलामा भेला भएका हजारौं दर्शकहरुको होहल्लाले छुट्टै संगीतको धुन गुञ्जिएजस्तो भान हुन्थ्यो । कालागाउँ खोला र जिमाली खोलाको संगम त्रिवेणी हुँदै भेरीको छेऊ भेट्न आतुर नागवेलीझै बगेको मर्मखोला र मर्मज्यूलीका फाँटहरु प्रष्टै देखिन्थे मेलटाकुराबाट । मर्मज्यूलीभन्दा अलि माथि सिनित्तै कपाल खौरिएझै नाङ्गो कालागाउँको डाँडो, त्यो भन्दा पारी-पारी जाजरकोटका अग्ला-अग्ला, अनकण्टार डाँडाकाँडा र पहाड पर्वतहरु अनि सेतै हिउँ थुपि्रएर टलक्क टल्किने रमका र चाखुरे हिमालहरु एकैपटक देख्न सकिन्थ्यो । मौसम यस्तै थियो- लाग्थ्यो, प्रकृतिले वर्षायामको विदाई र शरदको स्वागतका लागि तयारी गरिरहेको छ ।
मेला बाक्लिदै थियो मेलटाकुरामा । ठाउँ-ठाउँमा प्लाष्टिक र त्रिपालले बेरेर बनाएका स-साना पसलहरु । जेरी, हलुवा, आलुचप, समोसा र सेलरोटीहरु बनाउँदै-बेच्दै गरेका मौसमी पसलेहरु । अनि जेरी, हलुवा, सेलरोटीका लागि तँछाडमछाड गर्दै, यताउता धकेल्दै दुकान वरिपरी झुम्मिएका दर्जनौं केटाकेटीहरु । कोही दोहरीका क्यासेट घन्काउँदै त कोही राष्ट्रिय झोलको तालमा दायाँबायाँ हल्लिदै आँखा सन्काउनु, कोही खेलकूदको रमझममा हारजीतको बाजी थाप्दै रमाउनु, सधैंभरि घरधन्दामै व्यस्त भएर थाकेका-फुर्सद नपाएका महिला दिदीबहीनीहरु एकैदिन भएपनि घरबाहिर निस्कनु, पाएसम्म नयाँ-नयाँ पोशाकमा सजिएर दिदीबहीनी, दाजुभाई वा साथीसंगीहरुसँग रमाउँदै भेला हुनु आखिर यही त हो ग्रामीण क्षेत्रका मेला (जात्रा)हरुको विशेषता । ठीक यस्तै थियो त्यहाँ पनि ।
आकाश पनि त्यही थिए- मेलटाकुरा मेलामा । सायद उनी त्यतिखेर घर भेटघाटको क्रममा आएका थिए । त्यसदिन उनले ‘छेलो’ प्रतियोगिता र डोरी नाघ्ने अर्थात् ‘हाइजम्प’ प्रतियोगितामा सबैलाई जितेर प्रथम स्थान हाँसिल गरेका थिए ।
समय उस्तै नरहदो रहेछ । मैले महिना र गते भुलेँ । सायद असारको महिना हुनुपर्छ । करिब एकवर्षपछि त्यही मेलटाकुरामा उनकै श्रद्धाञ्जली सभा मनाइयो । एकवर्षअघि उनी यही थिए, साथीसंगी र गाउँलेहरुमाझ । हाँस्दै रमाउँदै मेला आएका थिए- छेलो र हाइजम्पमा विजयी भएका थिए । तर, एकवर्षपछि…..? वातावरण अर्कै छ मेलटाकुराको । मान्छेहरु भेला भएका छन्, भावुक मुद्रामा । पूरै स्तब्धता, सन्नाटा र अव्यक्त, भयावह सन्त्रास…..। गतवर्षको जस्तो उमंग, खुसीयाली र रमझम छैन, न त आकाश नै आएका छन् यहाँ । बरु उनको तस्बीर राखिएको छ मञ्चमा- अबिरले रातै छ तस्बीर, फूलमालाको बीचमा । निलो आकाश ? खै कतै पनि देखिदैन- न त कुमाख पहाड नै देखिएको छ । बादलले धुम्म ढाकेको छ चारैतिर । न पानी परेको छ न त घाम नै लागेको छ । जाडो भएजस्तो न गर्मी चढेजस्तो खैं कस्तो-कस्तो उकुसमुकुस भइरहेछ परिवेश । बृद्ध बाआमा, जीवनसंगीनी पूणिर्मा, छोराछोरीहरु, सहयोद्धाहरु, आफन्तजन, गाउँलेहरु सबै-सबै स्तब्ध छन्- उनको अभावमा । एउटा गहिरो पीडा छताछुल्ल पोखिएको छ- मेलटाकुरामा । अनि दन्किएको छ वर्गवैरीप्रति तीव्र आक्रोश र बदलाको भावना पनि ।
लालबोझी कैलाली – क्रान्तियात्राको एउटा कालखण्डमा वीरता र बलिदानको इतिहास बन्यो । एक सक्षम र निष्ठावान् लडाकु, क्रान्तिको अथक यात्री क.आकाश त्यही लालबोझीको मोर्चामा ढल्यो- फेरि कहिल्यै नफर्किने गरी ।
जेठमासको खण्डहर मौसम, दशगजादेखि थोरै भित्र- पश्चिम तराई कैलालीको लालबोझी उनीहरुको निशाना थियो । ०५८ जेठको पहिलो साता चुरे क्षेत्रबाट उनीहरु तराई झरे । तराईको गर्मी, मच्छेड र सर्पहरु त सामान्य नै भए उनीहरुका लागि । तत्कालिन राज्यसत्ताका रक्षक पुलिसहरुको बिगबिगी बढी खतरनाक थियो । ती सबै-सबै प्रतिकूलताबाट जोगिदै-छलिदै उनीहरु दुईचार दिन तराईमै बसे । जनसेनाको त्यो टुकडीको कमाण्ड उनैले गरेका थिए- क.आकाशले । तराईमा तीनचार दिनको बसाईपछि आक्रमणको दिन छनौट भयो- जेठ १३ गतेको साँझ ।
झण्डै ६ घण्टाजति तराईको जंगलमा हिडेपछि साँझ करिब ६ बजेतिर गन्तव्यमा पुगिसकेका थिए उनीहरु । लामो समयसम्म मोर्चा कसेर लड्न सम्भव थिएन त्यहाँ । बेलुकीपखको घामका राता किरणले पश्चिमी क्षितिज रातो भइसकेको थियो । गोधुली साँझको शान्त र सुनसानजस्तो लालबोझीमा एक्कासी शुरु भयो राज्यसत्ताविरुद्धको विद्रोहको एउटा घमासान मोर्चा । लालबोझी मोर्चामा सहभागी योद्धाहरु भन्छन्- मान्छेहरु कामकाजबाट घर-घरतिर फर्किदै थिए, पुलिसहरु सम्भावित दुर्घटनाको कुनै आँकलन नै नगरी वेपर्वाह चौकी रुँघेर बसिरहेका थिए । एक्कासी आक्रमण भएपछि उनीहरुको सातोपुत्लो नै उड्यो, हत्तपत्त प्रतिआक्रमण गर्न त खोजे तर युद्धमोर्चामा उनीहरुको पहलकदमी गुमिसकेको थियो । अन्ततः १५ मिनेटमै हार स्वीकार गरेर हतियार बुझाए पुलिसहरुले । चौकी पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको थियो । भवन दन्दनी जलिरहेको थियो । कार्बाही त सफल भयो तर दुर्भाग्य, कार्बाहीका होल कमाण्डर, तत्कालिन प्लाटून नं.१३ का कमाण्डर क.आकाश युद्धमोर्चामा ढलिसकेका थिए । युद्धमोर्चाको बाँकी अभिभारा बाँचेकाहरुलाई सुम्पिदै उनी सहिद भइसकेका थिए । विजयको खुसीयालीभन्दा कुशल कमाण्डरको सहादतले थिचिएका जनसेनाहरु गह्रौं पीडाकासाथ क.आकाशको शवलाई लिएर गन्तव्यतिर लागे ।
युद्धमोर्चामा कमै भएका छन् यस्ता घटनाहरु, जहाँ कमाण्डरहरु नै ढलेका छन्- रणसंग्राममै । जसले पार्टी, क्रान्ति र सहयोद्धाहरुलाई कहिल्यै नमेटिने गहिरो घाऊ बनाएको छ । जनयुद्ध थालनीको वर्षदिन नबित्दै पूर्व बेथान आक्रमणमा कमाण्डर क.तीर्थ गौतम ढले, त्यही समय पश्चिम रुकुम र डोल्पाको सीमाना त्रिवेणी चौकी आक्रमणमा क.विजय घलेको सहादत भयो । त्यसकै निरन्तरता जस्तो कैलालीको लालबोझी मोर्चामा क.आकाशको वीरगति ।
आजभन्दा ठीक ३८ वर्षअघि ०२७ भाद्र २ गते सल्यान जिल्लाको एकदमै विकट, दुर्गम र अविकसित बडागाउँ गाविसको सेरागाउँमा जन्मिएका थिए उनी । बुवा कले बोहरा र आमा बुङ्ची बोहराको कोखबाट जन्मिएका हल्का कालो वर्ण, ठिक्कको कद, सरल, सहृदयी स्वभावका धनी रुपलाल बोहरा नै क्रान्तियात्रामा आकाशको रुपमा परिचित भए । केटाकेटी छँदादेखि नै उनी खेलकूद यति मन पराउँथे कि बरु खाना खानै बिर्सन्थे रे । पहाडी जीवन न हो पढ्ने, लेख्ने र विद्यालय जाने उमेरमा घाँसदाउराको लागि कहिले च्याउखोला, सेरागाउँको जंगल त कहिले मालिकाको भीरतिर उक्लिनुपर्ने बाध्यताबाट उनी अछुतो हुन सकेनन् । उसो त गाईभैंसीको गोठालो बन्दै बारीका पाटा खोस्रदै बचेको समय पठनपाठनमा लगाउँदै उनले प्राथमिक तह र पछि एसएलसीसम्मको अध्ययन पूरा गरे ।
उनको गाउँको नामै बडागाउँ । आखिर गाउँको नाम बडागाउँ कसरी रहन गयो ? स्पष्टसँग मलाई थाहा छैन । तर, सुनेको छु त्यतिबेला कथित् ठूलाबडाहरु बसेकोले गाउँको नामै बडाहरुको गाउँ अर्थात् बडागाउँ रहन गएको हो रे । उसो त अहिले पनि त्यहाँ जमानाका कथित् बडाहरुका सेता घरहरु जीर्ण अवस्थामा पुगेका प्रशस्तै भेटिन्छन् । तिनै बडामालिक अर्थात् सामन्तहरुको छायामुनि परेको उनको गाउँ र सोझा गाउँलेहरुले कहिल्यै उन्नति गर्न सकेनन् । उसो त त्यसको असर परोक्ष वा प्रत्यक्षरुपमा अहिले पनि छ । त्यसको सोझो प्रभाव उनको परिवारमा पनि थियो । कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण बाल्यकालमै अनगिन्ती समस्याहरु गुजुल्टिएका थिए ।
सामाजिक अन्धविश्वास, रुढीवादी मूल्यमान्यता, पिछडिएको समाज, त्यसमा पनि उनै बडामालिक, भुरेटाकुरे सामन्तहरुको चुसाई र पिसाईले सुकेको गाउँ र गाउँलेहरुको अवस्था देखेर उनी बडाहरुबाट कसरी मुक्ति पाइन्छ भनेर सोचिरहन्थे रे । विद्यार्थीकालमै उनले सामाजिक विकृति विसंगति र बडाहरुको व्यवहारका विरुद्धमा गतिविधि बढाउन थालेपछि सुषुप्त अवस्थामै वर्गसंघर्षले ठाउँ लिन थालेको उनका सहकर्मीहरु बताउँछन् । जतिबेला उनीमा बडामालिकहरुका विरुद्ध लड्नुपर्ने चेतनाको विकास भइसकेको थियो त्यतिखेर जनयुद्धको थालनी पनि भइसकेको थियो । जनयुद्धको थालनीसँगै उनी भूमिगत भए । एउटा सामान्य किसानको छोराको रुढीगत जीवनमा क्रमभंग भयो- नयाा जीवनको शुरुवात गरे उनले । उनी बस्ती-बस्तीमा जनचेतना जगाउँदै हिडे- क्रान्ति र मुक्तिको सन्देश लिएर ।
कित्ताबन्दी भइसकेको थियो- बडामालिक र उनीहरु बीचमा । ग्रामीण वर्गसंघर्ष जब चर्किदै गयो, सामन्ती फटाहाहरु गाउँ छोडेर भाग्न थाले तर थुप्रै आकाशहरु पनि तत्कालिन राज्यसत्ताको आँखाको कसिंगर भए- राजद्रोही, आतंककारी । जब उनीहरु राजद्रोही, आतंककारीको बिल्ला भिरेर राज्यसत्ताको आँखामा फरार भए, ठीक त्यसबेला उनीहरु राती-रातीमात्र हिड्थे, दिनभर घरको बुँईगलमा लुकेर बस्थे । मध्यरातमा उनीहरु ढोका खट्खटाउँदै आउँथे ।
भूमिगत भएदेखि नै लडाकु दलका सदस्य बनेका उनी युद्धको विकास, आवश्यकता र क्षमताले गर्दा छापामार दल, स्क्वाइड सदस्य, पछि कमाण्डर हुँदै पश्चिममा पहिलोपटक बनेको स्पेशल टास्कफोर्सको सदस्य समेत बने । प्लाटून गठन भएपछि ३ नं.प्लाटूनको सेक्सन कमाण्डर भएर उनी भेरी करणालीका प्रायजसो जिल्लाहरुमा पुगेका थिए । सो क्रममा पश्चिम नेपालमा भएका अधिकांश फौजी कार्बाहीमा उनको जिम्मेवारीपूर्ण सहभागिता रहेको थियो । फौजी तथा राजनैतिक क्षमता, वैचारिक स्पष्टता र क्रान्तिकारी विचारले लैस उनलाई पार्टीले ०५६ को अन्त्यतिर १३ नं.प्लाटूनको जिम्मेवारी दिएर सेतीमहाकाली क्षेत्रमा पठाएको थियो । स्पेशल टास्कफोर्समा छँदा उनी थुपै्र मोर्चामा सहभागी भइसकेका थिए । त्यतिबेला टास्कफोर्सले पहिलोपटक दाङको चिराघाट इप्रकामाथि धावा बोलेर सानदार विजय हासिल गरिसकेको थियो । त्यसपछि रोल्पाको जेलवाङस्थित स्ट्राइकिङ प्रहरी बेस क्याम्प, जाजरकोटको लहँ इप्रका, सल्यानकै रामपुर इप्रका, रुकुमकोट इप्रका रेडलगायतका दर्जनौं मोर्चाहरुमा लडाई लडेको उनीसँग अनुभव थियो ।
जीवनको अन्तिम चरणमा उनले सेतीमहाकालीको युद्धमोर्चा सम्हालिरहेका थिए । जब पार्टीले कैलालीको लालबोझी उनकै कमाण्डमा कब्जा गर्ने निर्णय गर्‍यो, उनले आफ्नै बलिदानी दिएर अन्ततः पार्टीको योजना कार्यान्वयन गरेरै छाडे । उनकै कमाण्डमा जतिबेला लालबोझी कब्जा हुँदै थियो, घाम डुब्नै लागेका थिए पश्चिम क्षितिजमा । युद्धमोर्चामा विजय हासिल गरेर उनका सहयोद्धाहरु उही जंगलको बाटो हुँदै गन्तव्यतिर लागे । तर, जनमुक्ति सेनाको त्यो लस्करमा कमाण्डर आकाश थिएनन्- थियो त मात्र उनको शव सहयोद्धाहरुको काँधमा । त्यतिखेर गोधुली साँझको शान्त र उराठलाग्दो पश्चिमी क्षितिज झन रातो देखिन्थ्यो ।
०६५ फागुन २८ दाङ
Ukihana Tomodachi Samurai
तपाईको यो लेख पढेर मेरो त आंग नै सिरिंग भयो?मेरो एक जना भाइ पनि तपाईहरुकै पल्टनमा थियो।मरिसक्यो कि अझै जीवितै छ मलाई थाहा भएन।म कम्प्युटर प्राविधिक हुं।
घर छोडेको अन्तिम रात हवाई हमलाका भयानक ६ घण्टा